Bolivian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(455 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Kubhejera muBolivia
Kubhejera muBolivia hakuna kusimukira zvakanyanya, nekuti kubhejera kwese kwaive zvisiri pamutemo kune mazhinji zana apfuura. Muna 1930, kubhejera kwakarambidzwa munzvimbo dzinocherwa nyika, uye muna 1938 zvakarambidzwa zvachose. Yakagara makore anopfuura makumi matanhatu, ichigadzira ivhu rakaorera rekuvandudza kubhejera zvisiri pamutemo. Kuitira kudzivirira kukura kwayo, mu60 hurumende yaifanirwa kupa marezinesi enguva pfupi makamuri mazana maviri emachina emitambo uye makasino. Kubhejera muBolivia LONABOL yakatariswa kubvira 1996 (National lottery komisheni yerudo uye hutano).
Muna 2002, makasinasi akanyoreswa zviri pamutemo zvakare. Muna 2011, yakasikwa nemuviri wenyika wakapihwa mvumo yekupa marezinesi (anoshanda kwemakore gumi) uye kutonga kubhejera muBolivia. Parizvino, nyika ine chete 10 pamutemo vanobhejera vanoshanda: Lotex, Corhat, Jet Games uye Star Mirage. MuBolivia, zvakare kwakapararira kubhejera zvisiri pamutemo. Dzinenge mazana maviri emahoro emitambo uye anopfuura zviuru zvina zvemuchina weSlot anoshanda zvisiri pamutemo.
Kutamba Mutambo muBolivia
Hurumende yeBolivia yanga ichinonoka kugadzirisa nyaya yekubhejera pamhepo. Parizvino, hapana mirau nemirau, zvinoreva kubhejera paInternet, uye hurumende yeBolivia haina kutora danho rekutadzisa mutambi kuwana nzvimbo dzevashandisi vekunze. Nzvimbo zhinji dzekunze pamhepo kubhejera dzinopa masevhisi muSpanish, uye vamwe vanototsigira mari yemuno.
Rwokutanga rweHNUMX BOLOMUI YENYIKA PASI NZVIMBO
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuBolivia
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuBolivia, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epamhepo kukwidziridzwa, mabhonasi uye nzira dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuBolivia.
Online poker nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuBolivia
Ona runyorwa rwepamhepo poker saiti inogamuchira vatambi vanobva kuBolivia, uye nekupa mhando dzemhando yepamusoro uye dzakachengeteka. Nakidzwa nemisiyano mizhinji ye roulette, blackjack, hold'em, uye mimwe mitambo yemakadhi. Kuti uwane rumwe ruzivo, verenga kuongorora kwedu kwenzvimbo dzepamhepo poker dzinogamuchira vatambi vanobva kuBolivia.
Masayire online mitambo yekutengesa, kutora vatambi vanobva kuBolivia
Ona rondedzero yemasaiti ekubheja epamhepo pamutambo, kutora vatambi kubva kuBolivia, uye nekupa mitambo yepamusoro uye yakachengeteka. Isa mabheti ako, sarudza chakanyanya kukodzera kune Zviitiko zvako koeffitsinty pakati pezvikumbiro zvevanoverengeka gumi nemaviri emabookmaki epamhepo muBolivia. Uye kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa kune edu ekuongorora masosi pamhepo kubheja mitambo, kutora vatambi vanobva kuBolivia.
Nzvimbo dzebingo dziri paIndaneti dzinobvuma vatambi vanobva kuBolivia
Ona rondedzero yemasaiti ebingo epamhepo, kutora vatambi kubva kuBolivia, uye nekupa mitambo yepamusoro uye yakachengeteka. Rumwe ruzivo rwunogona kuwanikwa mukuwongorora kwedu kwenzvimbo dzebingo dzepamhepo dzinotsanangura kukwidziridzwa, mabhonasi uye nzira dzekuisa panzvimbo dzebingo dzepamhepo dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuBolivia.
Mobile kutambira njodzi dzinobvuma vatambi vanobva kuBolivia
Ona rondedzero yenzvimbo dzemitambo yekutamba, kutora vatambi kubva kuBolivia, uye nekupa mitambo yemhando yepamusoro uye yakachengeteka. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ekudzokorora nzvimbo nharembozha kubhejera kuti uzive akanakisa epamhepo kukwidziridzwa, mabhonasi uye sarudzo dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuBolivia.
0.1 Kutamba Mutambo muBolivia
0.2 Rwokutanga rweHNUMX BOLOMUI YENYIKA PASI NZVIMBO
2.1 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuBolivia
2.2 Online poker nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuBolivia
2.3 Masayire online mitambo yekutengesa, kutora vatambi vanobva kuBolivia
2.4 Nzvimbo dzebingo dziri paIndaneti dzinobvuma vatambi vanobva kuBolivia
2.5 Mobile kutambira njodzi dzinobvuma vatambi vanobva kuBolivia
supernova kasino hakuna dhipoziti bhonasi